အသက် (၆) နှစ်အရွယ် ဝမ်းကွဲညီမကို အကိုတော်စပ်သူမှ သားမယားပြုကျင့်ပြီး လည်ပင်းညှစ်သတ်မှုဖြစ်ပွား – XB Media Myanmar
March 2, 2019 Bestie_Author
ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး​မြောင်းမြမြို့နယ်​ ပျဉ်​ပုံအုပ်​စုအပိုင်​တွင်​အသက်​(၆)နှစ်​အရွယ်​မိန်းခ​လေးငယ်​တစ်​ဦးကို(၁၈)နှစ်​သားအရွယ်​အကိုဝမ်းကွဲ​တော်​စပ်​သူမှမတရားပြုကျင့်​၍လည်​ပင်းညှစ်​မျက်​နှာဦး​ခေါင်းတို့အားရိုက်​နှက်​၍​တောထဲတွင်​ပစ်​ထားခဲ့​ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်​. ဖြစ်​စဉ်​မှာသိလ္လာဂတ်​စုရဲကင်းအပိုင်​ပျဉ်​ပုံ​ကျေးရွာအုပ်​စု.​ယခင်(၉၃)စစ်တပ်​​​ကော်​ဖီစိုက်​ခင်းတွင်​တဲထိုး၍အလုပ်​.လုပ်​ကိုင်​စား​သောက်​ကြ​သောအဖ.ဦးချစ်​ထူး.အမိ​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ဝင်းတို့မှ​မွေးဖွား​သောသမီးငယ်​​လေး.မစုပုံချစ်​(ခ)မကြယ်​စင်​လင်းအသက်​(၆)နှစ်​KGတန်းသည်​ ၁.၃.၂၀၁၉ဒီမနက်​ပိုင်း​ပျောက်​​နေ​သော​ကြောင့်​ခ​လေးအား​တောထဲသို​ဝင်​ရှာ​ဖွေကြရာ “တရားခံ.​အောင်​ဝင်း​အေး.(၁၈)နှစ်​အဖ.ဦးဝင်းထွန်း.အမိ​ဒေါ်သန်း​အေး (ရှစ်​အိမ်​တန်းသား)အားထင်းစီးထမ်းပြီး​ပြန်​လာသည်​ကို​တွေ့သဖြင့်​ခ​လေး​တွေ့ခဲ့​သေးလား​ဟုမေးမြန်းရာမ​တွေ့ခဲ့​ကြောင်း​ပြောဆိုပုံမူမမှန်​သည်​ကိုမသင်္ကာသဖြင့်​မိခင်​ဖြစ်​သူနှင့်​အကိုဖြစ်​သူချစ်​မျိုးနိုင်​.တကွီး.ပုတ်​ပုတ်​တို့က​တောထဲတွင်​ဆက်​လက်​ရှာ​ဖွေရာခ​လေးငယ်​ညီးသံကြားသဖြင့်​သွား​ရောက်​ကြည့်​ရာခ​လေးငယ်​မှာဝတ်​လစ်​စလစ်​ဖြင့်​ချုံပုတ်​အတွင်းလည်းပင်းညိုမဲ.ပါးစပ်​​သွေးထွက်​.​အောက်​ပိုင်း​သွေးထွက်​ဒါဏ်​ရာများဖြင့်​​တွေ့ရှိခဲ့​ကြောင်းခ​လေးငယ်​အားအ​ရေး​ပေါ်​မြောင်းမြ​ဆေးရုံသို့ပို​ဆောင်​ကုသလျှက်​ရှိ​ကြောင်းခ​လေးမိခင်​ဖြစ်​သူ​ဒေါ်ယဉ်​ယဉ်​ဝင်းက​ပြောသည်​
ပန်းချီကားလေးတစ်ချပ်ကြောင့် ရှော့ရသွားတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
မင်းက များများချစ်ချင်ယောင် ပြတယ်ဒါပေမယ့် ခဏလေးပဲ ပြနိုင်တယ်” ဆိုပြီး ခံစားချက်တွေ ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ဘုဏ်းသိုက်